9 Siyaabood Oo Aad Ilaashan Karto Caafimaadka Maskaxdaada - Daryeel Magazine
9 Siyaabood Oo Aad Ilaashan Karto Caafimaadka Maskaxdaada
Tani waa xirfad qof kasta ay tahay inuu barto. Waxa jira buugaag iyo cajalado badan oo ka hadlaya is-dejinta, waxbarashada dadka waawaynina waxay qabanqaabisaa fasallo ku saabsan arrintaas. Jimicsi (yoga), baaraandegis (meditation), daliigis (massage) iyo daawo-dhireedku (aromatherapy) dhamaan way caawin karaan is dejinta.
Jimcsigu waxuu caawin karaa caafimaadka maskaxda iyo ka jirkaba. Waxuu beddeli karaa sida aad nolosha u aragtoo dhan, isagoo kugu caawinaya inaad ka takhalusto dareennada xunxun. Wax wayn buu ka bedeli karaa dadka qaba isku buuqsanta, niyad-jabka iyo is-naca. Waxay kaloo caawin kartaa inay joojiso dhibaataduba inay bilaabato marka horeba.
Dadka laga faa’iidaysto, ama sida xun loola tacaamulo, badanaa way ku adag tahay inay doodaan. Waxa laga yaabaa inay door bidaan inay dhibka iska qarsadaan, markaas laakiin caray la buuxsami karaan, taasoo keenaysa deganaan la’aan iyo isku buuqsanaan. Tababar lagu qaato dhiirranaanta waxay wanaajin kartaa kartida arrimahaan oo kale.
Tani waa ka fakaridda siyaabaha lagu hormarin karo nolosha. Dadku waxay u baahan yihiin inay is waydiiyaan, sidee baan jeclaan lahaa inay ummuuruhu noqdaan toban sano gudahood? Waa maxay isbaddellada yaryar ee aan hadda bilaabi karo? waxa suuro gal ah in nolosha laga sameeyo isbeddallo wanaagsan, inay adag yihiinba ha u muuqdeene.
Dareenkeenna oo aan u muujinno si xanaaq ah, oyno ama aan qaylinno waxay nagu caawisaa inaan ka soo kabsanno dhibaatooyin aan soo aragnay. Isku cabburinta dareenka iyo qiirooyinkaaga waxay keeni kartaa daal dhalin kara degganaan la’aan iyo isku buuqsanaan.
Cunto fiican: cuntooyinka caafimaadka maskaxda u wanaagsan waxaa ka mid ah, Afakaadhada (avocado), shukulaatada madow, looska nooca loo yaqaan almonds, kalluunka, biyaha cad, ukunta, yogurt iyo muuska.
Waxa jira jidad badan oo la isugu dayo in la fahmo xanuunnada madaxa. Buug-yarahani waxuu xoogga saaray aragtiyo hadda aad looga tix geliyo meelo ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka. Waddamo iyo caadooyin kale, kuwaasoo diintu ay muhiim tahay sida arrinta loo qaabilo aad bay sidan uga duwanaan kartaa. Waxa niyadda sii dejin lahaa in la helo xaqiiqooyin la isku wada raacsan yahay oo ku saabsan xanuunnada madaxa. Maadaama aynaan hayn, waxay dantu nagu kaliftaa inaan nafteenna uun ka fekerno, annakoo muujinayna khibradahayaga, dhegaysanaynana kuwa kale kuna qaabilayna araa’dooda maskax furan.
Adiguna ilaasho caafimaadkaaga!
Hababka Aad U Horumarin Karto Caafimaadka Wadnahaaga 4 Siyaabood Oo Aad U Dheereyn Karto Cimriga Baytariga Talefankaaga Casriga Ah